दीपिका हलिउड फिल्ममा – Butwal 24 News
September 1, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on दीपिका हलिउड फिल्ममा
मुम्बई : साढे ४ वर्षअघि दीपिका पादुकोनले भान डिजेलसँग ‘ट्रिपल एक्स रिटर्न अफ जेन्डर केज’ खेल्दै हलिउडमा पाइला चालेकी थिइन् । यो फिल्मले औसत सफलता पाएको थियो । यो फिल्मपछि धेरैको अपेक्षा थियो, प्रियंका चोपडा झैं दीपिका पनि हलिउडमा व्यस्त हुनेछिन् ।
तर लामो समय बितिसक्दा पनि उनले दोस्रो हलिउड प्रोजेक्ट हात पार्न सकिनन् । अब भने दीपिका आफैं तातिएकी छिन् । उनले अन्तर सांस्कृतिक रोमान्टिक कमेडी निर्माण र सँगै अभिनय पनि गर्ने भएकी छिन् ।
समाचारअनुसार उनले इरोजको एसटिएक्स ग्लोबल कर्पोरेसनसँग मिलेर यो फिल्म बनाउन लागेकी हुन् । निर्माणका लागि दीपिकाको का प्रडक्सनले हलिउडको टेम्पल हिल प्रडक्सनसँग सहकार्य गर्नेछ । टेम्पल हिल प्रडक्सनले यसअघि ‘ट्वाइलाइट’ फ्रेन्चाइज र ‘फल्ट इन आवर स्टार्स’ निर्माण गरेको छ ।
दीपिकाले ‘छपाक’सँगै आफ्नो प्रडक्सन सुरु गरेकी थिइन् । योबाहेक उनले अमिताभ बच्चनलाई लिएर रबर्ट डि निरो अभिनीत ‘इन्टर्न’को पनि रिमेक गरिरहेकी छिन् ।
निर्माणबाहेक दीपिका अहिले बलिउडमै भने ‘पठान’को सुटिङ गरिरहेकी छिन् भने सोही फिल्मका निर्देशक सिद्धार्थ आनन्दको ‘फाइटर’मा पनि दीपिकाको अभिनय रहनेछ । उनले बाहुबली फेम हिरो प्रभाससँग पनि एउटा फिल्म साइन गरेकी छिन् ।
नेत्री झाँक्री शिक्षा मन्त्री बन्दै !
कमेडी च्याम्पियन’मा भरतमणिको पूर्व युवराज पारस शाहको गेटअपको भिडियो किन बन्यो भाईरल ?
भरतमणीसँगको भेटमा पारसले भने–‘फन्नी फन्नी, दामी थियो’
October 26, 2021 Butwal 24 News
September 15, 2021 Butwal 24 News